Cameron.....: August 2011
Posted by coral nyo at 02:04 13 comments:
Posted by coral nyo at 23:34 16 comments:
GOSH!!!! စားချင်တာတွေကို ဂူဂယ်ကနေယူစားနေရတယ် သနားထှာ.....း(
ဆူရှီ ဆာရှိမိ တန်ပူရာလည်းစားချင်တယ်...။
Posted by coral nyo at 23:17 13 comments:
Posted by coral nyo at 00:17 21 comments:
Posted by coral nyo at 00:13 8 comments:
၀က်သားနှမ်းကပ်ကြော်... ဘီယာနဲ့မြည်းချင်စရာ ဟင်းတစ်ခွက်ပေပဲ..
အချိုပွဲ.... ဘရောင်နီကိတ် ချောကလက်အိုင်စရမ်တဲ့
Posted by coral nyo at 23:09 11 comments:
Posted by coral nyo at 12:28 13 comments:
Posted by coral nyo at 23:537comments:
Posted by coral nyo at 23:28 12 comments:
တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို သွေးစွန်းပေါ့
တစ်ယောက်ရဲ့ အတိတ်မှာ နစ်ဝင်တယ်။
တွေ့ ချစ် ဝေး ကွဲ
သမားရိုးကျ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေလို
တစ်ယောက်တည်း တစ်မျက်နှာအဖြစ်……။ ။(ညီသစ်)
Posted by coral nyo at 23:54 8 comments:
Posted by coral nyo at 22:36 17 comments:
ဘာလို့မှန်းကိုမသိဘူး...အဲဒီစကားလုံးကို ကြိုက်ခဲ့တာ ဟိုးး ငယ်ငယ်ကတည်းက...။ မိန်းကလေးဆိုတော့ ငယ်ကတည်းက ဆော့ကြရင်လည်း ရုပ်ရှင်ရိုက်တမ်းကစားကြမယ်ဆိုလည်း ကိုယ်က လှတပတ နတ်သမီးလေး နေရာက နေချင်ခဲ့တာ... ။ နတ်သမီးဆိုအရမ်းလှတယ်ဆိုတာပဲ နားလည်ခဲ့တာလေ....။ နောက်ပြီး အတောင်ပံလေးနဲ့ လင်းလက်နေတာကိုလည်းကြိုက်တယ်...။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကို လိုက်ကယ်တယ်လို့လည်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာခဏခဏကြည့်ဖူးတယ်လေ...။ ဒီတော့ အိန်ဂျယ်ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စွဲလန်းလာခဲ့တာ.....။ ခု..စာရေးဖြစ်တော့မှပဲ... အဲဒီစကားလုံးလေးကို ထည့်ထည့်သုံးဖြစ် တာလည်း နှစ်သက်လို့ပါ....။ နတ်သမီးဆိုတာထက် အင်္ဂလိပ်အသံထွက် အိန်ဂျယ်ဆိုတာကို ပိုကြိုက်တယ်....။ အိန်ဂျယ်ကို နတ်သမီးလို့ အကြမ်းဖျင်းသိထားပေမယ့်... တကယ်တမ်းတော့ နတ်သားလို့လည်း အဓိပ္ပါယ်ယူလုိ့ရသလို ဘုရာသခင်ရဲ့ တမန်တော်လို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်...။
Angel ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သီချင်းတွေအများကြီးထဲက Mariah Carey ရဲ့ Angels Cry..... Arosmith ရဲ့ Angel .... Shaggy ရဲ့ Angel....... နဲ့ Monica ရဲ့ Angel of Mine သီချင်းတွေကို ကြိုက်တယ်....။
မြန်မာသီချင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ ရေဗက္ကာဝင်းဆိုတဲ့ အိန်ဂျယ် သီချင်းလေးကြိုက်တယ်....။ ရုပ်ရှင်ကားမှာဆို City of Angel ...။ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း တော်တော်များများကြည့်ဖူးပါတယ် ...အိန်ဂျယ်ပါတဲ့ကားတွေလေ...။ နတ်သမီးချည်တိုင်တို့...ဘာတို့ပေါ့ အများကြီးပဲ မမှတ်မိတော့တာ...။ စာရေးဆရာအသစ်ထဲမှာတောင် နတ်သမီးဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်ရှိတယ်....။ သူ့စာအုပ်တွေတော့ မဖတ်ဖူးသေးဘူး....။
ဒီပို့စ်ကိုရေးဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တာကလည်း ကော်မန့်မှာလာရေးသွားတဲ့ ကိုညိမ်းနိုင် ကြောင့်ပါ...။ အိန်ဂျယ်ကို သီးသီးသန့်သန့်လေးတစ်နေရာ စုစည်းဖို့တွေးမိပေမယ့် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ.....။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိတယ်လေ... နတ်ဆိုးနဲ့နတ်ကောင်း...။ မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအားပေးတဲ့ နတ်ဆိုးက ခေါင်းမှာချိုပေါက်ပြီး နတ်ကောင်းကတော့ အတောင်ပံလေးနဲ့လို့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပုံဖော်တာ မြင်ဖူးကြမှာပါ...။ ကိုယ်နေမကောင်းတုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်သမီးလေးကို အိန်ဂျယ်နှင့်တစ်ညနေနဲ့ နတ်သမီးပုံပြင်မှာ ဒီလိုလေးရေးခဲ့ဖူးတယ်.....။ ညီမလေးခေါင်ခေါင်ဆီစာတွေ ကဗျာတွေသွားသွားဖတ်ရင်းနဲ့လည်း သူ့ရဲ့ အိန်ဂျယ်အပေါ်ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားထားတာလေးကို စွဲလန်းနှစ်သက်လွန်း ခဲ့လို့ သူ့ရဲ့အက်ဆေးဖြစ်တဲ့ အမုန်းဖွဲ့အိန်ဂျယ်နဲ့ ကမ္ဘာဖျက်မိုး ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လည်း ကျမရဲ့စုစည်းမှုထဲ မဖြစ်မနေပါရမှာပါ...။
၀တ္ထုတိုအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ဖူးတာကတော့ Letters to Angel ရယ် ...။ ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ တင်ခဲ့တဲ့ အိန်ဂျယ်ည တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်....။ အိန်ဂျယ်ကို အများဆုံးရေးဖြစ်တာကတော့ အက်ဆေးမှာပါပဲ....။ ကိုယ့်ရဲ့ အိန်ဂျယ်က ကိုယ်ရေးတဲ့ အက်ဆေးကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုလို့လေ....။ ကဗျာမရေးတတ်ပေမယ့် မတတ်တခေါက်လေးနဲ့ ဖန်ပုလင်းထဲက,ကဗျာတစ်ပုဒ်...ရယ်... ကဗျာမျက်ရည်.....ရယ် ကြယ်မိုး......ရယ်ဆိုပြီး အိန်ဂျယ်နဲ့ ပက်သတ်တာ သုံးပုဒ်ရေးဖူးတယ်.....။ ကြည်နူးစရာလေးနဲ့ အိန်ဂျယ့်အတွက် ပထမဦးဆုံး အိန်ဂျယ်ပါတဲ့ အက်ဆေးလေးကတော့...အိန်ဂျယ် တဲ့....။ ကိုယ့်အနားက အိန်ဂျယ်ပျောက်သွားချိန်မှာတော့ ပန်းချီကားဆန်ဆန် စိတ္တဇဆန်ဆန် ပုံပြင်ဆန်ဆန် အက်ဆေးလေးကို ပျောက်ဆုံးနေသောအိန်ဂျယ် နဲ့ ကိုယ်ဆေးခြယ်ခဲ့ဖူးတယ်....။ နားလည်မှုများနဲ့ အတူပျံသန်းချိန်....။ လက်လျှော့တော့မလို့လား.... အဝေးကပဲဆက်ချစ်သွားမယ်တဲ့....။ လွမ်းနာတာရှည်လို့ ကယောက်တမ်းနဲ့ ခေါင်းစဉ်မပါတဲ့ကောင်းကင်....။ တစ်သက်တာအတွက် မှတ်စု...။ ကော်ဖီခါးခါးအစား သောက်ခဲ့မိတဲ့ အလွမ်းခါးခါး....။ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ Goodbye နှုတ်ဆက်ပါတယ်...။ သတိရသေးရင်နှုတ်ဆက်ပါတဲ့....အမျှင်မပြတ်သေးတာ... လွမ်းမောတမ်းတနေသေးတာ...။ အိန်ဂျယ့်ကို...... အိပ်မက် မက်တယ်....။ You are my Angel ... forever... အမြဲတမ်းအတွက်....မင်း ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမအက်ဆေးတွေကို ချစ်တတ်တဲ့ အိန်ဂျယ့်အတွက် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတွေ ရေးဖြစ်သွားဦးမှာပါ...။ အိန်ဂျယ့်ကို အားပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံး.... ဘလော့ဂ်သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်....။
Posted by coral nyo at 05:19 8 comments:
ကျောင်းတုန်းက အဟောင်းတွေကို အသစ်ပြန်မရေးဖြစ်တာကြာပေါ့....။ တလောက Balazone သွားတော့... ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ မိသားစုတွေ တပြုံတမကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်...။ တပြုံတမကြီးလို့ရေးရတာက သူတို့မိသားစုလေးငါးယောက်အပြင် သူ့ယောက်ခမကြီးရော ကလေးထိန်းတွေရောလေ....။ သူ့အမျိုးသမီးလေးက တတိယမြောက်သားလေးကို ထပ်မွေးထားတာမကြာသေးဘူးတဲ့....။ ဒီလိုပါ ကျောင်းတုန်းက သူနဲ့ တခြား ရုပ်ရှင်မင်းသားအလောင်းအလျာများအကြောင်း နည်းနည်းအပုပ်ချချင်ပါတယ်...။ ဟဲ...ဟဲ... ဒီပို့စ်ဖတ်မိတဲ့ သူတို့အမျိုးတွေ မိတ်ဆွေသယ်ရင်းတွေ မိုးငွေ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်မလား. ချောင်းရိုက်မလား တစ်ခုခုပဲဗျို့....။
ကျမတို့ RC3မှာ ကျောင်းတက်တုန်းကျမတို့အဖွဲ့ထဲမှာတိုက်ကွမ်ဒိုက အမတစ်ယောက်ပါတယ်....။ သူမိတ်ဆက်ပေးလို့ တိုက်ကွမ်ဒိုက ယောက်ကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများနဲ့ သိတယ်...။ ပိုင်ဇေက အဲဒီတုန်းက မြန်မာ့လက်ရွေးစင်... ။ ကျမတို့နဲ့တော့ ကျောင်းမတူဘူး ...။ သူက RC2က....။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေက ကျမတို့ကျောင်းမှာများတော့ လာလာလည်တယ်....။ သူက ဘိုဆန်ဆန်ရုပ်နဲ့ နုဖတ်ပြီးချောတော့ ကျောင်းထဲဝင်လာရင် အကုန်လုံးကငေးမောကျရတာ...။ ကျမကတော့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်အဲဒီလောက် နုဖတ်ချောမောနေတာကိုမကြိုက်ဘူး....။ အသားညိုမှ အရပ်ရှည်မှ ယောက်ကျားပီသမှကြိုက်တာ...။ ဒီတော့ ငေးမောတဲ့ အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့....။ သူက ရုပ်ကလေးချောတော့ နည်းနည်းတော့ မာန်တက်တာပေါ့ဗျာ....။ တစ်ကမ္ဘာလုံးလုပ်ကျွေးတဲ့ ရုပ်မျိုးအမြဲဖမ်းထားတတ်တယ်...။ အဲ... သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စတိုလ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်....။
အဲဒီလိုနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းက ကိုးရီးယားမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးပွဲရှိတယ်... သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ ကစားသမားတွေကို ပန်းစည်းကမ်းဖို့ ကျမကို အကူညီတောင်းပါတယ်....။ အဲဒီချိန်က ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွေ သိပ်ခေတ်မစားသေးပါဘူး...။ ကိုးရီးယားကစားသမားတွေကို ပန်းစည်းကမ်းမယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ် ကူညီမယ်ဆိုပြီး လက်ခံလိုက်တာ....။ တကယ်လည်းပွဲစရော....မြန်မာနဲ့ ကိုးရီးယားကစားသမားတွေ တစ်ယောက်ခြားဆီ ကွင်းလယ်မှာ တန်းစီးရပ်နေကြတယ်...။ ပိုင်ဇေလဲပါတယ်လေ....။ ပန်းစည်းကိုင်ပြီး ကျမဆုတောင်းနေမိတယ် သူနဲ့မကျပါစေနဲ့... ကိုးရီးယားကောင်လေးနဲ့ပဲပန်းစည်းကမ်းရပါစေပေါ့....။ သူနဲ့က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆက်ပေးထားပေမယ့် သူ့ပုံစံကိုမကြိုက်လို့ သိပ်လဲ မခင်ဘူးလေ...။ ဆုတောင်းမပြည့်ပါဘူးဗျာ...။ တကယ်ကြီး ပိုင်ဇေနဲ့ကို တည့်တည့်တိုးတာ...။ ကောင်စုတ်လေးက ပန်းကမ်းပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့ လက်မကမ်းပေးဘူးလေ.... အဲလို အကျင့်မကောင်းတာ...တမင်သက်သက်လုပ်တာလေ....။ နောက်တော့ကျမှ... ရင်းနှီးလာတော့မှသိတာ... သူ..ကျမကို စလိုက်တာပါတဲ့...။ မခက်လား လူပုံလည်မှာ ကျမက လက်ကြီးကမ်းပေးပြီး လေထဲမှာပြန်ရုတ်လိုက်ရတာ...ဘယ်လောက် ဖီးလ်အောက်လဲ...။
တကယ်တော့ သူက သဘောကောင်းရှာပါတယ်.. သူ့မျက်နှာထားကိုက အော်တို အဲလိုဖြစ်နေတာတဲ့...။ အင်းလျားလမ်းထဲ သင်္ကြန် သူမဏ္ဍတ်လုပ်တော့သွားဖြစ်သေးတယ်...။ အဲဒီတုန်းက သူက မင်းသမီးလေးတစ်လက်နဲ့တွဲနေပြီလေ (အဲ...နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်ပြီထင်တယ်)...။ ကိုဂျွန်လွင်ရဲ့ မော်ဒယ်အေဂျင်စီမှာ သင်တန်းတက်ပြီး ဆီဒိုးနားမှာ ရှိုးပွဲလုပ်တော့ သွားကြည့်ကြသေးတယ်....။
ခုတော့လည်း သူက တကယ့် လူကြီးဖြစ်နေပါပြီ လူကြီးမှ ကလေး သုံးယောက်ဖအေကိုဖြစ်နေပါပြီ.... ဇနီးငယ်ငယ်... သမီးချောချောလေးနဲ့ ချစ်စရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ သားကလေးနှစ်ယောက်တောင် ပိုင်ဆိုင်ထားနေပါပြီ....။ ခုနောက်ပိုင်း ဗီဒီယိုခွေတွေမှာ မင်းသားအစ်ကိုနေရာတွေက ပြန်ရိုက်နေတာတွေ့နေရပြီ...။ အောင်မြင်ပါစေ... သူငယ်ချင်း....။
နောက်တစ်ယောက်အကြောင်း အပုပ်ချရအောင်....အဲလေ... ပြောကြအောင်....။ သူကတော့ ကျမတို့နဲ့ တစ်ကျောင်းထဲ ဒါပေမယ့် သူက Phys မေဂျာက...။ သူလည်း တိုက်ကွမ်ဒိုကပဲ....။ အားတော့နားပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ပြောပြချင်ပါတယ်....။ သူက စကားပြောရင် တံတွေးမသိမ်းတတ်ဘူး... ဘိုလိုမပြောဘဲနဲ့တောင်မှ သူနဲ့စကားပြောရင် ရှောင်လင်သိုင်းတော့ တတ်ထားရတယ်...။ အဟဲ... ကျမ မသိလိုက်လို့ ခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု ပြောပြဦးမယ်...။ တစ်နေ့ ကျမတို့ RC3 ၀င်ဝင်ချင်း ဆင်ဝင်မရောက်ခင် တစ်ဖက်တစ်ချက်က ပုဏ္ဏရိတ်ပင်တွေနဲ့စည်းလုပ်ထားတဲ့ ပန်းခြံသေးသေးလေးရှိတယ်..။ ကျမတို့ထိုင်နေကြတာက ၀င်ဝင်ချင်း ဘယ်ဘက်ခြမ်း ပုဏ္ဏရိပ်ပင်ဒေါင့်ချိုးက ဗာဒံပင်အောက် ခုံတန်းလေးမှာ..။ အဲဒီအပင်ပေါ်မှာကလည်း ကျီးကန်းတွေက သိပ်သောင်းကျန်းတာ...တအာအာနဲ့ကို ဆူနေတတ်တယ်....။ ကျမရယ်..ကျမသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ အဲဒီတိုက်ကွမ်ဒိုအစ်ကိုချောနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့...။ စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကျမဘယ်ဖက်လက်ဖျံပေါ် “ဘတ်”ဆိုပြီး...တစ်ခုခုလာစင်တယ်လို့ခံစားရတော့ ကျမက အပင်ပေါ်က တအာအာ ဆူညံနေတဲ့ ကိုကျီးကန်းများဆီကို ချက်ချင်းမော့ကြည့်လိုက်တယ်...။ စိတ်ထဲမှာလည်း ချက်ချင်းပဲ အင်းးး ငါတော့ ကျီးကန်းချေးပါချတာ ခံလိုက်ရပြီပေါ့...။ အဲသလို မော့ကြည့်နေချိန်မှာပါ အောင်မင်းဝင်းက ကျမလက်ကိုဆွဲယူပြီး တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်...။ “ဆောရီး...ဆောရီးသူငယ်ချင်းငါ့တံတွေးနင့်လက်ကို စင်သွားတာပါ”တဲ့....။ သေရောဗျာ...။ ရယ်လည်းရယ်ချင်... ငိုလည်းငိုချင်ဖြစ်သွားတာပေါ့....။ ကျောင်းပြီးတော့ မော်ဒယ်လ်အေဂျင်စီတွေ ဘာတွေဖွင့်လိုက်သေးတယ်...။ ခုတော့...မြန်မာဗီဒီယိုခွေတွေမှာ... မင်းရဲဆက် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်နေပါတယ်...။ မင်းသား.... အင်မတန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင် ...။ အစပိုင်းကတော့ အရံအနေနဲ့ လူကြမ်းဗီလိန်နေရာက အရိုက်များနေရာကနေ...ခုတော့ ခေါင်းဆောင်နေရာက စရိုက်နေရပြီလို့တော့ ကြားတာပဲ....။ အဆက်သွယ် မရှိကြတော့ဘူးလေ...။ တိုက်ကွမ်ဒိုက အစ်ကိုတွေကလည်းမလွယ်ဘူးရယ်....။ မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့သူ အများသား...။ သတ္တိကလည်း တိုက်ကွမ်ဒိုကပဲ....။
နောက်ပြီး ကျမတို့အခန်းထဲက နာမည်တော့သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး... ကျောင်းတုန်းကတော့ သူ့ကိုမင်းသားလို့ပဲခေါ်ကြတာ...။ အော်...သူက ကျောင်းလာရင် မျက်နှာကို ဖွေးနေအာင် ပရိုမီနာအမြဲလိမ်းပြီးလာလို့ ပရိုမီနာလို့တောင် နာမည်ပြောင်ခေါ်ကြတယ်...။ ဦးကျော်ဆီမှာ တပည့်သွားခံပြီး ကားတော်တော်များများမှာ ပါသေးတယ်...။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ပျောက်သွားရော....။ ညီနန္ဒအကြောင်းကိုတော့ ဒီမှာ တစ်ခါရေးထားပြီးသားမို့ ထည့်မရေးတော့ဘူး....။ ပျော်စေ ပျက်စေပါ... ကျောင်းတုန်းက အမှတ်တရလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားချင်တာသက်သက်ပါပဲ... ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့ စိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး...။ အဆက်သွယ်ရှိနေဆဲ သူငယ်ချင်းတွေရော... အဆက်သွယ်မရှိတော့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ အရာရာအောင်မြင်အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....။
Posted by coral nyo at 23:546comments:
ညီသစ် ဆိုတာ... တစ်ခါတုန်းက ကျမတို့ ကမ်းခြေသွားခဲ့ကြတုန်းက သီချင်းတွေအများကြီးဆိုခဲ့တဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ထဲက ဂီတာတီး အင်မတန်ကျွမ်းတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါ...။ ဒါ့ပြင်... ကဗျာ အနုအရွလေးတွေရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်း ၀ါသနာထုံသူမို့... သူ့ဖဘရဲ့ Notes မှာတင်ထားတဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကဗျာလေးကို ဘလော့ဂ်မှာတင်ဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်....။ ကဗျာတွေအများကြီးထဲမှာမှ... သွားဖတ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီတစ်ပုဒ်ကို အရမ်းမုဝင်တာမို့ ဒီတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်လိုက်တာပါ....။ နောက်နောင်လည်း အလျင်းသင့်သလို ညီသစ်ရဲ့ ကဗျာကောင်းလေးတွေကို ထပ်တင်ပေးဦးမှာပါ...။
Posted by coral nyo at 23:31 8 comments:
အမှန်တော့ စပါ့ဂတီခေါက်ဆွဲကြော်ကို သူများဘလော့မှာ သွားလျှောက်လည်ရင်းတွေ့ခဲ့လို့ စားချင်တာနဲ့ ကြော်ကြည့်လိုက်တာ....။ အရွက်တွေကိုတော့ များများစားစားမထည့်တော့ပါဘူး...။ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ မုန်ညင်းဖြူထုပ်နဲ့ မုန်လာဥနီနှစ်လုံးသုံးလိုက်တယ်....။ ကြက်ရင်အုံသားကိုပါးပါးလှီးပြီး မိုးငွေ့တို့ရဲ့ မာရီနိတ်တစ်စတိုင်အတိုင်းပဲ ကြက်သားမှုန့် ငရုတ်ကောင်း ပဲငံပြာရည်အကြည် ပြောင်းမှုန့်နဲ့ ဆီနည်းနည်း နယ်ပြီးနှပ်ထားလိုက်တယ်...။ မုန်ညင်းဖြူကိုလှီးပြီး ရေဆေးထား ဥနီနှစ်လုံးကိုအမြောင်းလေးတွေလုပ်ပြီး အပွင့်ဖော်လိုက်တယ်...။ စပါဂတီကို ရေဆူဆူမှာ ဆားခတ်ပြီးပြုတ်လိုက်ပါတယ်....။ နူးလာရင် ရေအေးဆေးပြီး ကြာညို့ ငံပြာရည်နဲ့ ဆီထည့်ပြီးနယ်ထားလိုက်တယ်....။ ဒယ်ပူပူမှာ ဆီထည့်ပြီး ဓါးပြားရိုက်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ကြော်... မွှေးလာရင် ကြက်သားကိုကြော်... ကြက်သားရရင် အရွက်တွေထည့်ပြီး အရွက်မနွမ်းတနွမ်းအချိန်မှာ စပါဂတီိထည့် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်ပြီး အပေါ့အငံမြည်း ကြည့်... အိုကေရင်ရပါပြီကွယ်........။
Posted by coral nyo at 11:449comments:
Posted by coral nyo at 11:36 8 comments:
Posted by coral nyo at 12:217comments: